UK oo Faransiiska ugu hanjabtay inay dib ugu celin doonto muhaajiriinta ka soo gala xadka ay wadaagaan
Britain ayaa oggolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha sida muhaajiriinta ee sida sharci-darrada ah ku soo gala xeebaheeda, taas oo sii xoojinaysa khilaafka kala dhexeeya Faransiiska ee ku aaddan sida loola tacaali karo dad faraha badan ee naftooda biimeynaya.
Saraakiisha xadka ayaa loo tababari doonaa inay doomahan ku qasbaan inay ka fogaadaan biyaha Ingiriiska, iyagoo adeegsan doonaan xeeladda cusub ee dib u celinta marka ay u arkaan inay ammaan tahay. Sarkaal ka tirsan dowladda Ingiriiska oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay Khamiistii.
Michael Ellis, oo ah sii-hayaha xeer-ilaaliyaha guud ee Britain, ayaa u dejin doona saldhig sharci ah saraakiisha xadka, si ay u helaan istiraatiijiyadda cusub, ayuu yiri sarkaalku.
Patel ayaa careysiisay dawladda Faransiiska horraantii toddobaadkan markii ay tilmaamtay in Britain aysan fasixi doonini ilaa 75 milyan oo doolar oo ahaa ballan qaad la xiriiray in Ingiriisku uga qeybqaadan doono joojinta qulqulka muhaajiriinta.